Gaa na ọkụkọ na ọkụkọ 2Kg | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Jee Okuko Chicken na Duck 2Kg - Ordrs
Gaa na ọkụkọ ọkụkọ na ọbọgwụ 2Kg
Ngwa nri zuru ezu maka nwamba ndị okenye.
Nwamba anyị bụ ndị na-enyocha ihe okike, dị ndụ n'ihe niile dị n'ụwa ha. Ọ bụ ihe a mere ha ji bụrụ ezigbo ndị ezinụlọ ma na-ebute nnukwu ụlọ anyị.
Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara Purina® ji kee Go-Cat® maka nwamba ndị toro eto: nri pusi na-atọ ụtọ iji zụlite mmasị na-enweghị ngwụcha nke ụwa gị.
Go-Cat® na-enye nwamba ezigbo nri na-edozi ahụ ọtụtụ iri afọ. Anyị na-ejupụta ọtụtụ nde efere na nsọpụrụ a na-eji nnukwu ọrụ. Ọ bụ ya mere eji eme Go-Cat® Ezi ntụziaka na-enweghị agbakwunye agba agba, ụtọ ma ọ bụ ihe nchekwa. Yabụ ị nwere ike ịmebe ha otu nri dị ụtọ ha hụrụ n'anya ma nwee etu isi.
Site na Go-Cat®, ụwa nke nchọpụta malitere site na nri kwesịrị ekwesị iji kwado ọrụ nkịta gị dị oke mkpa:
- 100% nri zuru oke na nke kwesịrị ekwesị
- Nwere eriri sitere n'okike sitere n'okike iji kwalite ezigbo mgbaze
Go-Cat® na-enye onye nyocha gị na-atụ ụjọ ihe oriri na-edozi ahụ ọ chọrọ na ezigbo uto ọ hụrụ n'anya, iji zụlite nchọpụta ya oge niile ma nyere ya aka ịme ahụike na obi ụtọ.
Ndị ọkachamara Purina® kere Go-Cat® maka nwamba ndị toro eto: nri pusi na-atọ ụtọ iji zụlite mmasị na-enweghị ngwụcha nke ụwa gị.
GO-CAT® na-enye ọtụtụ ngwaahịa maka nwamba gị n'agbanyeghị afọ na ndụ
Kitten: Maka uto ahụike nke kittens
Senior: Nri na-edozi ahụ maka ụmụ nwamba
Ime ụlọ: Na-enyere aka belata isi ísì ụtọ maka nwamba ime ụlọ
Crunchy & Obi ebere: Textures abụọ dị iche iche maka ọ catụ pusi gị
100% zuru ezu na itule
Nwere eriri sitere n'okike sitere n'okike iji kwalite ezigbo mgbaze
Ezé na ọkpụkpụ dị mma na-akwado mineral dị mkpa na vitamin D
Akwara akwara na-akwado protein dị mma
Enweghị agbakwunye agba agba, ekpomeekpo ma ọ bụ ihe nchekwa
Ngwugwu ngwugwu: 2kg